musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » TAAI Tourism Yekushanyirana neGujarat Tourism
Nhau Nhau • Bhizinesi Kufamba • Shamwari dze eTurboNews • Hospitality Industry • India Kupwanya Nhau • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • Akasiyana Nhau
TAAI yekushanya conclave
Iyo Travel Agents Association yeIndia (TAAI) nguva pfupi yadarika yakaita Tourism Conclave kubva munaKurume 9-12, 2021, yakarongeka yakabatana neGujarat Tourism.
Chiitiko ichi chakarongeka kudzidzisa nhengo dzevatengesi vekufamba uye kusimudzira Gujarat senzvimbo yekushanya kune vashanyi vekunze nevari mukati.
Ichi chirongwa ndechekuona kuti nhengo dzajairana nenharaunda kusimudzira uye kumutsidzira kusimudzira kwekushanya.
Nhengo dze TAAI dzinofanirwa kunge dzakagadzirira nemazano matsva uye marongero ekuona kuti kushanya kuIndia kunofambiswa navo nenzira inotsvedza.
Iyo TAAI Yekushanya Conclave yakaona nhengo kubva kumatunhu makumi maviri uye zvitsauko kuIndia kutora chikamu muhusiku-husiku, chiitiko chemazuva mana kuKevadia. Chiitiko ichi chakarongedzwa kudzidzisa nhengo dzekushambadzira uye kusimudzira Gujarat senzvimbo yekushanya kune vashanyi vemo pamwe nevari mukati, akadaro Mutungamiri weTAAI Mai Jyoti Mayal. Nhengo dzekutengesa dzaive dzichipinda munguva dzakaoma nekuda kwedenda reCOVID-20 uye izvi zvakapa mukana wekuti vatore shanduko uye kugona kuongorora, akadaro.
Nhengo dzenhengo dzakaona pekugara uye zvivakwa paTende Guta 1 uye Tende Guta 2 kuKevadia pamwe chete nemanheru echikepe chemanheru padhuze neRwizi Narmada nekudya kwemanheru mumapoka maviri. Kuona chifananidzo chakareba kwazvo pasi rose paStatue of Unity (SoU), Jungle Safari, Sardar Sarovar Dam Project, Valley of Flowers, uye Cactus & Butterfly Garden yakaitwa. Chiumbwa cheUbatanidzwa chinoratidzira Iron Man weIndia, Sardar Vallabh bhai Patel, inotarisirwa kukurudzira zvizvarwa zvine Sardar Patels chiratidzo chekubatana, kuda nyika, kukura kusanganisa, uye hutongi hwakanaka. Vamiririri vakashanyirawo magadheni mashanu mukati meArogya Van (Herbal Garden) iyo inoratidza dzakasiyana siyana miti yekurapa nenzvimbo dzine hukama nehutano. Nhengo dzakashanyirawo tsika yekutenga nhandare yeEkta Mall mudunhu reSoU.
Ichi chirongwa cheTAAI ndechekuona kuti nhengo dzajairana nenharaunda kusimudzira Dekho Apna Desh uye kumutsidzira kusimudzira kwekushanya kwepamba uye kwakawanda kuburikidza nehunyanzvi uye kusangana kwavo, akadaro Mutevedzeri weMutungamiri Jay Bhatia.
Chikamu chebhizimusi-chemazuva chebhizimusi chakarongedzwa munaKurume 11, 2021, icho chakataurwa na Hon. Gurukota rezveKushanya, Hurumende ye India, Shri Prahlad Singh Patel, kuburikidza nevhidhiyo meseji. Akagamuchira kutanga kwe TAAI, iyo yakagadza muenzaniso wenhoroondo we positivity nekuda kwekuchinja kwenguva. Akawedzera kuti kuve nhengo yeTAAI ine zvese zvine chekuita nemasangano ehunyanzvi uye mune ramangwana rinouya basa nematambudziko zvichawedzera kana vashanyi vakawanda vatanga kushanya kuIndia. Nhengo dze TAAI dzinofanirwa kunge dzakagadzirira nemazano matsva uye marongero ekuona kuti kushanya kuIndia kunofambiswa navo mushe mushe, akadaro.
VaJenu Devan, Commissioner we Tourism uye MD-Gujarat Tourism, vakataura kumusangano uyu kuburikidza nekufona kwevhidhiyo kwavakasimudzira zvirongwa zvehurumende mukusimudzira Gujarat pasirese uye vakatenda komiti ye TAAI nekuunza nhengo dzavo kuSoU, kuGujarat uye zvakare yakavimbisa rutsigiro ruzere uye kurudziro kunhengo mukusimudzira Gujarat senzvimbo yakanaka.
Hon. Secretary General, VaBettaiah Lokesh vakapa pfupiso yezvikamu zvebhizinesi vachitaura kuti, kero yekuvhura yaive yekuvhura maziso uye chiono chenhengo dzeKushanya Kwemumba neMutungamiri Jyoti Mayal. Nhaurirano yepaneru yakamisikidzwa neMutevedzeri weMutungamiri Jay Bhatia paBharat ka Vikas - Inopa Simba Dzimba Dzevashanyi, yakanga iine panelist saDr Achyut Singh Jt. General Manager- Indian Railways (IRCTC) uyo akataura nezve kubatanidza vashanyi kusvika kune yakatarwa mamaira uye kuti nhengo dzeTAAI dzinosimudzira sei mapakeji ezvitima kune vafambi muIndia. Mharidzo yakaitwawo naDr Singh kuti nhengo dzinyore uye dzibatanidze ne IRCTC. Mr. Ajay Kumar Wadhawan, Chief of Sales kuAir Asia India vakapinda muchikamu vachitsanangura maonero enhandare nyowani nekubatana kwemhepo kune nhandare diki muIndia zvakare. Mutungamiri wekare weTAAI, VaBalbir Mayal vakapa maonero avo pamusoro pekuchinja kuri kuita mukushanya nekushanya kwemakumi emakore apfuura uye kuti India ichava sei nzvimbo yepamusoro yevashanyi munyika pamwe nehurongwa hwekubatana kweTAAI pakunyora uye kugona kugona nemapazi ekushanyirwa ehurumende, ndege, njanji, nezvimwe.
Izvi zvakateverwa nehurukuro pamusoro pe "Panokunda Vanokunda" boka rinotariswa naVa Ashish Gupta, Muvambi - Strategic Pluto uye Consulting CEO we FAITH. Nhaurwa ine hutano neIATA uye mashandiro ayo yaive naVaRodney Dcruz, Asst. Director IATA akaburitsa maonero, maonero uye ramangwana reIATA. HSG, Bettaiah Lokesh aimiririra TAAI uye aive nezwi anomiririra nyaya dzehukama neIATA pamwe nendege. VaSunil Kumar Rumalla, Mutungamiri weUFTAA vakapa maonero epasi rose ezvinetso zvakatarisana nevamiriri pasi rese neIATA uye vakapa kurudziro kuIATA kuitira kuve nechokwadi chekurarama nendege pamwe nevamiriri.
Nhaurirano yakagadziriswa naVaAmish Desai, TAAI Karnataka Chapter Sachigaro pamwe naAmai Parineeta Sethi, Chief Editor & Muparidzi wePinacle Connect, kambani inotungamira midhiya muhutano uye hwomutambarakede naMai Vasdha Sondhi, MD Om Marketing. Mai Jyoti Mayal, Sachigaro Tourism uye Hospitality Skill Council (THSC) vakapindawo muchirongwa ichi vachikurukura kugutsikana kweVatengi mukushanya kuburikidza nehunyanzvi, kushambadza uye kugona. Nehunyanzvi hwavo mukutengesa, kushambadzira, PR uye vezvenhau, tekinoroji nekusimudzira hunyanzvi, wepaneru akataura kuti mazuva ano nhengo yeTAAI inoshanduka sei kutevedzera nekupihwa simba nehunyanzvi hwese kunze kwekuendeswa kwesevhisi. Akagadzirisa zvakare nezvezvirongwa zviri kuuya zveWITT (Vakadzi muTAAI neKufamba), uko TAAI ichadzorera kunzanga nekupa vakadzi simba kuti vave mabhizimusi kuburikidza nehunyanzvi uye kushandira kuita kuti India ive nzvimbo yakachengeteka yekushanya.
Kukoshesa kuedza uye kutanga kweGujarat Hurumende uye Gujarat Tourism kukoka TAAI nenhengo dzayo kuSoU, Hon. National Treasurer-TAAI, VaShreeram Patel muvhoti yavo yekutenda vakasimbisa basa reTAAI mukukura nekusimudzira kwekutengeserana. Akatenda chiratidzo cha Hon. Gurukota rezveKushanya VaJawahar bhai Chavda, avo pamwe neMunyori Mukuru Wekushanya - Gujarat, Mai Mamta Verma, Commissioner Tourism uye MD weGujarat Tourism, VaJenu Devan naVaNirav Munshi - Manager Commerce (Kufamba & Kushambadzira) pamwe ne vamwe vakuru vakapa rutsigiro ruzere ku TAAI. Anotendawo Indigo Airlines iyo yaive yega ndege iyo yaivimbisa nhume kubva kukona dzese dzeIndia dzakabatana neGujarat pamusangano uyu.
Mamwe makongiresi akadaro munyika yose acharongeka mukubatana neHurumende Tourism Tourism munguva pfupi iri kutevera iyo inodzidzisa, hunyanzvi uye kupa simba vatengesi veTAAI kusimudzira Incredible India, vakadaro Mai Jyoti Mayal.